Indlu Enkulu Enamagumbi ◦ Amabini Enebhalkhoni - I-Airbnb
Indlu Enkulu Enamagumbi ◦ Amabini Enebhalkhoni
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguMajor
SiyiHotele yeBoutique encinci kwaye esondeleleneyo, ebanjwe kuyilo oluhonjisiweyo oluhonjisiweyo kunye nenqaku lomntu. I-Major's House Boutique Hotel ise-Stepanavan, eArmenia, apho umoya usoloko uhlaziyekile, utyebile ngeoksijini kwaye usulungekile ukusuka kumahlathi ashinyeneyo.
Ihotele yethu egqityiweyo iphezulu inomlinganiswa owahlukileyo kwaye wayilwa kwaye yakhiwa sesona situdiyo sibalaseleyo soyilo saseArmenia.
Sinyanisekile kwilifa lethu kwaye sibonelela iindwendwe ngenkonzo eyenzelwe wena kakhulu.
IStepanavan imi kumantla eArmenia kwaye kukholelwa ukuba yidolophu ekuchithelwa kuyo iiholide ngenxa yembonakalo entle yomhlaba. Itholakala elunxwemeni loMlambo waseDzoraget ojikelezwe ngamahlathi eLori kunye neentaba zeBazum.
IStepanavan yaziwa ngokuba nemozulu efumileyo nepholileyo entabeni, nechazwa njengeyona ibalaseleyo eArmenia. Umoya uhlala uhlaziyekile, utyebile ngeoksijini kwaye umsulwa ukusuka kumahlathi ashinyeneyo. I-Stepanavan kunye neelali ezikufutshane nayo inokuninzi onokuyinika iindwendwe. Kukho iinqaba ezininzi, iicawe, iibhulorho kunye neendawo ezingcwele zokuthanda nokonwaba.
Umbuki zindwendwe ngu- Major